Oge oyi dị ize ndụ karịa ihu igwe dị ọkụ | Netwọk Mgbasa Ozi
Taa, Sọnde Mee 31, anyị na-agwụ ọnwa ma banye n'ụzọ zuru oke n'oge ọkọchị. Nke ahụ ziri ezi, n’agbanyeghi na ihe dị ka ụbọchị iri abụọ na otu ruo oge ọkọchị ga-abịa, nke bụ eziokwu bụ na mpaghara ụfọdụ nke mba ahụ temometa na-ebili, na-eru okpomọkụ dị ka nke a na-ahụkarị n'ọnwa ndị dị ọkụ.
N'oge a, ihe egwu na-ata ahụhụ, mana ... You mara na ihu igwe oyi dị egwu karịa ọkụ? Nnyocha e bipụtara n'akwụkwọ akụkọ ahụ »The Lancet» eruola nkwubi okwu a. Nọgide na-agụ ka ịmatakwu.
Ọ na-apụta na anyị na-ekwenye na ihu igwe dị oke bụ ihe kpatara ọnụọgụ kachasị elu, ebe ọ bụ na Amụma ahụike ugbu a na-elekwasị anya na ichedo ahụike anyị n'oge oge ọkọchị, dị ka Dr Gasparini si kọwaa, site na London School of Hygiene and Tropical Medicine (nke dị na UK).
Gasparini na ndị otu ya nyochara ihe karịrị nde 74 nwụrụ n'etiti 1985 na 2012 na mba 13 nke oke igwe dị iche iche, sitere na oyi ruo ebe okpomọkụ. Iji mee nke a, a gbanwere ọtụtụ mgbanwe dị ka ọkara okpomọkụ ma ọ bụ iru mmiri, ma si otú a nwee ike gbakọọ ọnọdụ kacha mma (ya bụ, okpomọkụ dị mma maka ahụ mmadụ) nke ịnwụ anwụ. Ọnwụ n'ihi ọnọdụ okpomọkụ na-abụghị ezigbo ọnọdụ (oke okpomọkụ) ka a na-agụkwa ebe ọ bụla enyocha.
N'ihi ya, ha gosipụtara nke ahụ gburugburu 7% nke ọnwụ niile kpatara ọnọdụ na-enweghị oke okpomọkụ, nke 7% ha niile bụ n'ihi oyi oyi. Naanị 29% nke ọnwụ ka ekwere na okpomọkụ.
Ihe data a nwere ike inyere aka gbasaa mmemme nchedo ahụike ọha na eze, ọ bụghị naanị n’oge ọkọchị, kamakwa n’oge udu mmiri.
Nke ahụ kwuru, sị, jiri sunscreen n'oge kacha sie ike ọnwa, na… echefula chebe gị site na oyi.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Meteorology » Ciencia » Oge oyi dị egwu karịa ihu igwe ọkụ